Fenoarivo Atsinanana: inspektera polisy telo lahy matin’ny fitsarambahoaka | NewsMada
Fenoarivo Atsinanana: inspektera polisy telo lahy matin’ny fitsarambahoaka
Tsy voafehy intsony ny hatezeran’ny tantsaha sy ny mpandraharaha noho ny fisolokiana, ny kolikoly, indrindra ny halatra lavanila mirongatra izaitsizy any amin’ny distrikan’i Fenoarivo Atsinanana. Leo ny mponina ao amin’ny fokontany Ambodihazinina, kaominina ambanivohitra Ambatoharanana, ka maty niharan’ny fitsaram-bahoaka, vokatr’izany, ireto inspektera polisy telo lahy.
Tsy nisy nanam-po! Hay polisy ireto telo lahy, samy inspetera ireto matin’ny fitsarambahoaka Nisahotaka, noho izay, ny iray tanàna raha nahafatatra fa polisy
ireo telo lahy tonga tao an-toerana niharan’ny fitsarambahoaka ka namoy ny ainy. Fantatra fa polisy avy amin’ny sampana ekonomika-Toamasina ny roa lahy, ary miasa ao Fenoarivo Atsinanana kosa ilay fahatelo matin’ny fitsaram-bahoaka. Samy mitondra ny grady inspektera avokoa izy telo lahy.
Raha ny angom-baovao avy amin’ny polisim-pirenena hatrany, ny talata lasa teo no tonga tao Fenoarivo-Atsinanana izy roa lahy, mitonona fa nahazo iraka tanterahina ka nandalo tao amin’ny kaomisera ao an-toerana izy ireo. Omaly alarobia no tonga tao Ambodihazinina izy telo lahy ary tsy nisy nanao fanamiana maha polisy fa fanamiana sivily avokoa. Nanao fanadihadiana mpandraharaha mpanao lavanila iray tao Ambodihazinina izy ireo. Ity farany izay vao notafihin-jiolahy, ny 20 oktobra lasa teo.
Taorian’ny fahatongavan’ ireto polisy nanao fanamiana sivily ireto, nisy niantso vonjy tao
amin’ ilay mpandraharaha ka teo no raikitra ny savorovoro. Vory maro ny fokonolona niaraka tamin’ny kibay sy antsy lava. Tratran’ireo tao an-trano ireto polisy ka niharan’ny fitsarambahoaka .
Ny loharanom-baovao hafa indray, milaza fa vantany vao nahita azy telo lahy nanatona ny tranony ilay mpandraharaha lavanila, niantso fokonolona avy hatrany, ka fitsaram-bahoaka no nitsena azy ireo.
Miantso ny olona ho tony…
Hatramin’ny fotoana nanoratana ny lahatsoratra, mbola tsy misy aloha ny fisamborana, saingy ny delegasiona mafonja avy amin’ny sampandraharahan’ny filaminana
anatiny Toamasina no nidina any Ambodihazinina, omaly tolakandro, izay notarihin’ny tale iraisam-paritra, ny kaomisera divizionera Ramampiandry Nicolas.
Nanao fanambarana ny polisy fa tena namita iraka ireo polisy ireo, ary efa andalana hiverina sady efa nahavita ny tatitra tamin’ny lehibeny. Miantso ny olona ho tony noho izany ny polisim-pirenena.
Mampahatsiahy ny zava-nitranga tany Antsakabary ity raharaha ity. Polisy roa matin’ny fitsaram-bahoaka, niitatra tamin’ny valifaty ary nampiala minisitra teo amin’ny toerany.
Raha tsy mitandrina ny polisy, mety hiverina ny raharaha toy ireny. Endrika maneho hatrany ny amin’ny tsy fahatokisan’ny vahoaka ny mpitandro filaminana izany. Efa mandry tsy lavo loha ny olona, ka mifangaro hatramin’ny olon-dratsy sy ny mpitandro filaminana. Andrasana ny fivoaran’ny toe-draharaha.